HomeWararka MaantaBuffon Oo Ciyaaryahanada Juventus Cambaareyn Huwiyey
Gianluigi Buffon ayaa rumaysan in naadiga hogaanka u haya horyaalka Serie A ee Juventus ciyaaryahanadeedu yihiin kuwa kaliya ee lagu eedayn karo fashilkii ku dhacay ciyaartii ay la ciyaareen kooxda Cesena Axadii.
Arturo Vidal ayaa khasaariyey kubad rigoodhe ahayd oo loo dhigay dhamaadkii ciyaarta kooxda Juventus kulankan barbar dhaca 2-2 da ah ay isla dhaafi waayeen kooxda Cesena , oo haddii ay ka guuleysan lahaayeen ay sagaal dhibcood oo nadiif ah horyaalka kaga hayn lahayd naadiga ku soo xiga ama kaalinta labaad fadhiya ee Roma, oo iyadana barbar dhac 0-0 ah ay ku qabatay Parma.
“Kadib markii aanu daawanay natiijadii Roma u soo hoyatay, waxaanu filaynay ama rajaynaynay inaanu dhibco badan horyaalka ku hogaamin doono,” ayuu kabtanka iyo goolwadaha naadiga Juve , Buffon ku yidhi saxaafada Talyaaniga.
“Looma dul qaadan karo inaanu maalin kasta khasaarino fursad sidan oo kale qaali u ah.
“Natiijadii Roma ayaa dhab ahaan naga dhigtay kuwo ku fikira inay si fudud u guulaysanayaan, laakiin koox naadigayaga oo kale ahi uma dulqaadan karto inay iyadu gacanteeda isku birayso oo ciyaaro kale natiijo ka filato.”
Chelsea vs Arsenal 0-0 Highlights & Goals – EPL Cup
“Xidhiidhka Kubada Cagta Waxa Looga Fadhiyaa Inay Ciyaaraha Boodhka Ka Tumaan” – Cabdirisaaq Axmed Aadan
Horyaalka China Oo Manchester United Ka Afduubanaya Mourinho